» “अन्तरजातिय विवाह गरेका, कारण जंगलमा लुकेर बसेका यि, जोडी २१ दिन पछि घर फर्किए, परिवारको के छ, प्रतिकृया ? “अन्तरजातिय विवाह गरेका, कारण जंगलमा लुकेर बसेका यि, जोडी २१ दिन पछि घर फर्किए, परिवारको के छ, प्रतिकृया ? – हाम्रो खबर
“अन्तरजातिय विवाह गरेका, कारण जंगलमा लुकेर बसेका यि, जोडी २१ दिन पछि घर फर्किए, परिवारको के छ, प्रतिकृया ?
“काठमाडौ । अन्तरजातिय विवाह परिवारले स्वीकार नगरेका कारण जंगलमा लुकेर बस्नुपरेको भन्दै एक जोडीले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले चासो लिएको छ । उनीहरुलाई २१ दिन पछि घर फर्काइएको छ । परिवारका सदस्यले रुकुम घट,ना दोहोरिनसक्छ भन्दै चेतावनी दिएपछि आफुहरु जंगलमा बस्नुपरेको भन्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।
“जोडीले भिडियो सार्वजनिक गर्दै सुरक्षा मागे पछि प्रहरीले उनीहरुलाई बोलाएको हो । अन्तरजातीय विवाह गरेका कैलालीको भजनी नगरपालिका ७ का प्रकाश विश्वकर्मा र मालती रावल २१ दिनपछि बिहीबार बेलुका घर फर्किएका हुन्। उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय भजनीको टोलीले छलफलका लागि बोलाएको हो। दुवै तर्फका परिवारका सदस्यलाई पनि प्रहरीले छलफलका लागि बोलाएको जनाएको छ ।
विवाह गरेका ,जोडीको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि प्रहरीले त्यसमा चासो देखाएको हो। शुक्रबार प्रकाशको घरमै पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय भजनीको टोलीले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।”
“इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नरबहादुर साउदले अहिले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको बताए। उनीहरु कार्यालयमा पुगेपछि थप कुरा हुने साउदले बताए।”